Archive du 20161117
Alain Ramaroson Hanao krismasy ao Antanimora ?
Telo volana any am-ponja izao i Alain Ramaroson. Fanaovana hosoka sy fampiasana hosoka amin�ny taratasim-pandovana no nitorian�ny fianakaviany azy ka namoahan�ny Fampanoavana didy savaranonando fitazonana am-ponja vonjimaika nanomboka tamin�ny 3 aogositra 2016.
Antenimierandoholona Nisintaka teny Ankorondrano
Nanatanteraka atrikasa niaraka tamin�ireo loholona teny amin�ny Ibis Akorondrano, momba ny kaonty, ny fitsarana Malagasy omaly alarobia 16 novambra 2016.
Fivorian�ny Frank�f�nia Miaramila 7000 no ahetsika
Efa hitovy amin�ireny tany miady ireny ny eto Antananarivo mandritra ny herinandro hisian�ny fivorian�ny OIF.
Didier Ratsiraka Andrasana any Toliara
Taorian�i Fianarantsoa dia i Toliara no tan�na faha-5 hampiantrano ny fankalazana ny faha-40 taonan�ny antoko Arema.
Hery Rajaonarimampianina Nomen�i Fran�ois Hollande lesona
Frank�f�nia ? Raikitra io ary filoham-pirenena maherin�ny telopolo izao no efa nanamafy fa ho avy eto Madagasikara, hamonjy ny Fihaonana an-tampony faha-16 hotanterahina ny 22 ka hatramin�ny 27 novambra 2016.
Ahoana mihitsy moa izahay ry Jean no tsy havelanareo hiaina ny fiainanay mahazatra fa tadiavinareo hisitri-belona amin�ny frankofonia ?
Fifandraisana 200 taona ny fifankatiavana Malagasy-Anglisy
Hankalazaina amin�io taona ho avy 2017 io ny faha-200 taona nanaovan-tsonia ny fifankatiavana Malagasy sy Anglisy, natomboka tamin�ny Fanjakan-dRadama I
ANOSIKELY Nandray ny delegasiona avy amin�ny Fondation Friedrich Erbert (FFE) ny Filohan�ny Antenimierandoholona.
Pr�scolaire- EPP Ambodin�Isotry Nahazo efitrano vaovao
Nahazo efitrano vaovao hahafahany mivelatra ireo kilonga madinika pr�scolaire manovo fahalalana eo anivon�ny sekoly ambaratonga fototra etsy Ambodin�Isotry.
Fidiran�ny mpianatra Cisco Atsimondrano Teny Ampitatafika ny lanonana ofisialy
Tontosa omaly teny amin�ny fokontany Ankaditany, kaominina Ampitatafika ny fanokafana ny fidiran�ny mpianatra amim-pomba ofisialy taom-pianarana 2015 -2016 ho an�ny fari-piadidiam-pampianaran�Antananarivo Atsimondrano.
GROUPE VIDY VAROTRA Notolorana fanomezana ireo zanaky ny mpiasa afa-panadinana
Vondrona iray anisan�ny mijery akaiky ny maha olona ny vondrona Vidy Varotra. Noporofoiny tamin�ny alalan�ny fanolorana mari-pankasitrahana sy fanomezana ho an�ireo zanaky ny mpiasa miisa fito afa-panadinana CEPE sy BEPC tamin�iny taom-pianarana nivalona iny izany omaly, tetsy amin�ny foiben-toerany etsy Soanierana.